Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ise osimiri ghara uche mgbe ezumike na Seychelles
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ụsọ osimiri Seychelles
N'ịbụ onye ama ama maka ịma mma ya na osisi na anụmanụ dị egwu, osimiri ndị dị na Seychelles turquoise acha anụnụ anụnụ na mmiri na -ekpo ọkụ bụ ihe na -esere onwe ha. Site na mpe mpe akwa na-enweghị ntụpọ ruo ogologo nkwụ na eriri nwere olu, agwaetiti ọ bụla nwere "anse" nzuzo ya.
Seychelles bụ agwaetiti dị n'Oké Osimiri India nwere ihe karịrị agwaetiti 100 mara mma n'aha ya.
Enwere ihe karịrị osimiri 120 dị egwu ị ga -enwe mgbe ị na -eleta mba paradaịs a nke jupụtara n'oké osimiri.
Nke a bụ oke osimiri 5 kwesịrị ịdị na listi nleta ọ bụla nke ndị njem nleta mgbe ọ nọ na Seychelles.
N'inwe ihe karịrị osimiri 120 ịhọrọ site na naanị agwaetiti atọ dị na Seychelles, nke a bụ ụsọ mmiri ise nke kwesịrị ịdị na ndepụta nkwụsị onye ọbịa ọ bụla.
Ebe nzuzo dị egwu, na La Digue, Anse Cocos dị n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke obere agwaetiti Seychelles ọ bụkwa naanị nkeji iri atọ ka ị ga-esi nweta ya, ma ọ bụ site n'okporo ụzọ Grand Anse ma ọ bụ n'akụkụ ọzọ site na Anse Fourmis. Amachaghị nke ọma karịa Anse Source D'Argent nwere foto nke ukwuu, nke ya na ya na-ekerịta atụmatụ ndị a, ọmarịcha Anse Cocos bụ ihe a na-akwanyere ùgwù maka akụkụ zoro ezo, nke na-eme ọmarịcha ya niile.
N'ịbụ nke a maara dị ka osimiri ama ama na Praslin, Anse Lazio na -edekarị aha n'etiti oke osimiri iri kacha elu n'ụwa. Ndị nche granite nke merela agadi na-eche nche na nsọtụ abụọ nke eserese a zuru oke nke aja ọcha dị nro na-eduga na mmiri doro anya, zuru oke maka igwu mmiri na igwu mmiri. A ga -enwerịrị na ndepụta onye ọbịa ọ bụla, Anse Lazio ka na -adị jụụ ma ọ gaghị emechu ya ihu.
Ọkacha mmasị ọzọ na Praslin, ọmarịcha Anse Georgette bara uru nke ukwuu nkeji iri atọ site na ogige Constance Lemuria Resort. N'aka nke ọzọ, ụgbọ mmiri na -enweta ya. Ọ bụrụ na ị ruo Anse Georgette, aja aja dị nro nke ahịhịa ahịhịa na -ama jijiji ga -emeri gị, yana ebe na -atọ ụtọ nke ukwuu.
A na -ewere ya na ọ bụ osimiri kacha ese foto n'ụwa, na ịnya ịnyịnya ígwè na -agafe site na La Digue's L'Union Estate, a na -ahụta akara ngosi a pụrụ iche maka nnukwu okwute granite ya kamakwa aja ọcha ya dị nro na mmiri turquoise doro anya. N'ịbụ nke mmiri kpuchiri, oké osimiri na -adị jụụ na Anse Source D'Argent, na -eme ka ọ bụrụ ọkacha mmasị maka ezinụlọ na ndị di na nwunye chọrọ ka ebili mmiri na -ama ha jijiji ma ọ bụ nwalee aka ha n'ikuku. Ekwesịrị, ọ bụrụ na ịnọ na La Digue!
A na -akọwakarị dị ka “ọmarịcha” ma ọ bụ ọbụna “pụrụ iche,” Anse Takamaka bụ otu n'ime osimiri mara mma nke Mahé. N'ịbụ nke dị na ndịda Mahé, Anse Takamaka na-egosipụta ọmarịcha osimiri kaadị ozi, ebe mmiri ọhịa nke Oke Osimiri India na-abịa n'ikpere mmiri.